Rodgers Oo Bedelaya Mourinho-ha Shaqada Laga Ceyrinayo – Garsoore Sports
Rodgers Oo Bedelaya…
Tababaraha kooxda Leicester City Brendan Rodgers ayaa ah dookha koowaad ee kooxda Tottenham si uu badal ugu noqdo Jose Mourinho xagaagan.
Kooxda Mourinho ee Spurs ayaa xilli ciyaareedka ku bilaabatay qaab fiican, waxayna hoggaanka u haysay horyaalka Premier League kahor bishii December 6deedii markaasoo ay 2-0 kaga badisay kooxda ka dhisan waqooyiga London ee Arsenal ciyaar ka dhacday Tottenham Hotspur Stadium.
Laakiin tan iyo markaas, natiijooyinka ayay qaab-cayaareed isku dhafan ula imanayeen.
Kooxda Tottenham ayaa haatan fadhida kaalinta 8aad ee miiska kala-sarreynta horyaalka Pl-ga, iyagoo lix dhibcood ka hooseeya kaalmqha loogu soo baxayo horyaalka Europe.
Iney uso baxaan ololaha 2021/22 ee Champions League-ga ayaa ahayd shuruudaha ugu yar ee uu milkiile Levy usoo bandhigay Mourinho bilowgii xilli ciyaareedka, laakiin qaab ciyaareedka aan kala sooca lahayn ee Spurs ayaa u oggolaatay farqi aan loo dulqaadan karin inuu u dhaxeeyo iyaga iyo afarta sarre ee haatan joogta miiska kala-sarreynta.
Ilo ayaa u sheegay 90min in maamulka kooxda ay ku fikirayeen in ay gaaraan go’aan lagu bedeli karo tababare Mourinho tan iyo bilowgii sannadka, waxaana loo badinayaa in Mourinho uu sii joogi doono shaqadiisa kaliya ilaa xagaaga haddii uu kahor istaago kooxda qaab ciyaareed iyo nasiib wanaag lama filaan ah.